China Summer Mens T-Shotamas vita amin'ny akanjo vita amin'ny akanjo vita amin'ny tanety, avo lenta 100% landihazo, akanjo natory ho an'ny lehilahy, orinasa sy mpanamboatra | Ruisheng
Fitaovana mavesatra vita amin'ny akanjo mafana Pajamas mafana amin'ny akanjo mafana any New 100% Cotton mampientam-po amin'ny lehilahy matory
Izahay dia orinasa mpamokatra matihanina. Mamoaka pajama vita amin'ny tànana lehilahy marobe izahay ary an-trano sy any ivelany, satria manana fitaovana tsara, endrika tsara ary fitaovana tsara izahay. Raha mila vokatra namboarina ianao, afaka mifandray aminay foana ianao amin'ny santionany sy ny teny nalaina farany
Karazana lamina Print
vozon'akanjoko Ny hafa
Length Halava feno
Season Fararano, Lohataona, fahavaratra
Karazana famatsiana Entana an-tsompitra
Material landihazo, kitapo takiana
Type lamba ba nataony
Technics vita pirinty
Anarana marika RUISHENG \_ OEM
Karazan-javatra hitafy ny akanjo mandry
Fandefasana Fandefasana haingana
MOQ Ekeo ny fitsapana kely
Fanamarihana Ny vidiny dia ho an'ny vokatra mahazatra, raha mila fanaingoana bebe kokoa ianao dia tsindrio azafady mba hifandraisa aminay!
1. Ny fanontaniana sy ny fanontaniana rehetra dia hovaliana ao anatin'ny 24 ora.
2. Ny ambaratonga kalitao anisan'izany ny fenitra packing no tsara sy azo antoka indrindra.
3. Ny fepetra farany fandoavam-bola.
4. Ekeo ny haben'ny fanao, marika manokana, sary famantarana ary fonosana!
1. Izahay dia mpamatsy iray miorina any jingsu, Chine, miaraka amin'ny traikefa an-tserasera 10 tapitrisa. Mivarotra amina firenena 40 manerantany isika, anisan'izany i Germany, France, Europe, USA. Tao anatin'izay taona faramparany dia mitazona fihenam-bidy 50% isika.
2.Ny mpanjifanay dia misy marika iraisam-pirenena maro. Ny sasany dia nifandray taminay 5-8 taona.
3. Manana ekipa mpivarotra 2 izahay: lamba, akanjo. Ny varotra tsirairay dia manana traikefa 8 taona miasa. Izahay dia afaka manome anao serivisy tokana hijanona ho an'ny vokatra rehetra. Ny fiaraha-miasa amin'ny ekipa tsara dia mety hiantoka hamaly ireo karazana fanontaniana rehetra ao anatin'ny 2 ora. Ny kolontsainan'ny varotra dia fandrosoana ary asa iraisan'ny ekipa.
4.Wa manana fifehezana mafy ny fitantanana ny famatsiana famatsiana. Manana orinasa izahay, 2-3 ora miala amin'ny lianyungang. Mandamina lamba / fitaovana izahay, ohatra: mifehy ny kofehy ka hatramin'ny lokony; Manome serivisy tanteraka izahay avy amin'ny famolavolana / zavakanto, hatrany amin'ny prototype voalohany, prototype farany, santionany PP, famokarana betsaka, hatramin'ny fizahana mialoha ny fandefasana.
Previous: Ireo mihazakazaka Fitness akanjo akanjo lava lava Sleeve Sports dia mila maina haingana
Manaraka: Ski palitao matihanina matihanina avo lenta sy azo itokisana
Mens mihazakazaka akanjo fitondra manao akanjo lava lava Sp ...
Cotton mens polo Shirt Fanamiana Polo Embroidery ...
Lozom-baravarankely ivelan'ny rivotra iainana avo ...